Owayesakuba developers Blockstream ukudala supercomputer kwi blockchain - Blockchain News
EyoMdumba 5, 2018 admin
Owayesakuba developers Blockstream ukudala supercomputer kwi blockchain
Ben Gorlick and Johnny Dilly washiya iqela Blockstream developers ukuba asebenze kwiprojekthi yabo ezoba ilifu computer ntshungu Machine. Gorlick kuyinto umqondisi technical, kunye Dilli nguye intloko lokwakhiwa kweenkqubo.
Ababhekisi phambili bakholelwa ukuba iinkqubo ilifu computing kufuneka ukuphuculwa, kunye Isihlwele Machine inikeza isisombululo blockchain. A ezoba computer ilifu uya kwenza inkqubo yokudala izicelo nakweyiphi blocker ngokukhawuleza yaye kungabinandleko: “Yintoni sisebenzela Izakutshintsha imithetho ngawo isoftware wadala kwaye iyabaleka,” Gorlick uthe incoko Coindesk.
Le projekthi ibandakanya iinkampani ezininzi ukuba kuluhlu uThamsanqa 500 iinkampani, kuquka kaWonke and Anthem. Ngelo xesha, ababhekisi phambili bavavanya inkqubo isicelo ukuqapha Ethereum.
Njengoko owayesakuba ilungu Blockstream, Ben Gorlik ubona ingxaki nesibakala sokuba kube nzima kakhulu ukuba ukusebenzisa oomatshini blockchains ukwenza iimveliso isekelwe phezu kwabo. Ichaza umgaqo nkqubo entsha, yena luxela isicelo-ikhalenda. Kudla it akha kwiqonga efini njenge Google Cloud okanye Amazon Web Services. Kodwa lonke ixesha umsebenzisi iyasebenza, imali ebizwayo ukusuka kumqambi. Gorlick ukholelwa ukuba le nkqubo a “yebhotile”, nto leyo ekhokelela ukuba iindleko eziphezulu.
Ukusebenza Isihlwele Machine kungenxa yokuba nawuphi na umsebenzi umsebenzisi iyahlulwahlulwa sinamalungu amaninzi uze baqondiswe kwinethiwekhi kwezixhobo, ngasinye apho inxaxheba ekwenziweni kwawo. Ngaloo ndlela, isicelo iqala kwaye uqhuba inkqubo, kodwa abasebenzisi hayi ebotshelelwe eyodwa provider.
kwakhona, abasebenzisi isicelo uza kukwazi ukufumana umvuzo ngokusungula inkqubo zonke iintlobo izixhobo: laptops, Smartphones kunye nezixhobo “Internet izinto”. Le khompyutha isebenzisa ingcamango yokuba “mfelandawonye strong”, leyo Gorlick and Dilly edala Blockstream. Uqinisekisa ukuba iindawo ziya kwenza ikhowudi ngokuchanekileyo.
Ngaxeshanye, abaqambi isicelo esizayo Isihlwele Machine-based musa nokuba kufuneka ukwazi lwezobuchwepheshe: Isihlwele App Studio ikuvumela ukuba adale izicelo usebenzisa yekhompyutha ividiyo kwimo urhuqo-nowiso.
“Ukubhala isivumelwano smart izandi kusabeka. Kufuneka ukususa imiqobo”, Ben ukholelwa Gorlick.
ke, ukudala izivumelwano smart Ethereum unako ngaphandle ulwazi luphila ulwimi lokuprograma. Yaye kwixesha elizayo inkonzo izakuxhasa ezinye iilwimi lokuprograma, kubandakanya Script bitcoin.
Mastercard umbonile ...
Cryptocurrency umbolekisi Blockfi iphakamisa $ 1.55M-mali
New isiqalo York-based ...
Post Previous:deVere Group uqala cryptocurrency yorhwebo app
Post Next:Kumazwe ahlukeneyo, Amaxabiso bitcoin ingahluka